Tababbarka dharka Koorsooyinka kormeerayaasha rinjiyeynta | Ampp
Maya: F-32, Dabaqa 1aad, Wadada 2aad, Anna Nagar East, Chennai
XIRIIRKA QARANKA QARANKA 'Portal' waa midka awoodda iyo aqoonta leh ee Tababarka iyo Shahaadada Shahaadada loogu talagalay Daboolka Kormeerayaasha iyo Kormeerayaasha Rinjiyeynta ee qayb ka ah HTS COATINGS. Waxay ka shaqeysaa Daaweynta Dusha sare ee la xidhiidha Daaweynta Warshadaha, Codsiyada daahan, Baadhista Rinjiyeynta, iyo Qaababka Tijaabada
Noocyada Tababbarka Daabacaadda waxaa soo saaray Khubaro Khibrad u Leh Dahashada Warshadaha iyo Khabiir. Ku khabiirka daahan asalka saliida, gaaska, kiimikada, badda, maraakiibta maraakiibta, warshadaha culus. Arday badan oo ka shaqeeya Onshore, Offshore, Pipeline, Process Industries ayaa ka faa'iideystay barnaamijyadan waxbarasho ee E-learning. Mustaqbalka dhow, waxaan go'aansaneynaa inaan soo bandhigno koorsooyin badan oo laxiriira xirfado kale sida alxanka, Dahaadhida, Dabka ka-hortagga, Gelinta Dhex-dhexaadinta kulul, Buufiyeynta kuleylka, Maareynta iyo maaraynta, iwm.
Dahaarka Horumarka Xirfadeed ee Kormeeraha
Kadib marka la dhammeeyo koorsooyinka internetka, aqoonyahanku wuxuu u shaqeyn karaa sidan soo socota: -
Kormeeraha Anticorrosion Anticorrosion
Injineerka Koontaroolka Jabaqda
Kormeeraha QC / QA
Khabiirka Maandooriyaha Daawaynta
Khabiirka Falanqaynta Fashilka Ragga
Faa'iidooyinka Tababarka Coatings Online
Faa'iidooyinka soo socdaa waxay ahaayeen kuwa faahfaahsan oo laxiriira Tababarka Kormeerayaasha Daboolka Khadka Tooska ah
E-learning / Qaabka tooska ah ee internetka wuxuu wanaajiyaa kaqeybgalaha helitaanka 24 X 7 & 365 maalmood. Waxay ku isticmaali karaan tababarkan khadka tooska ah goobta shaqada / guriga / waqtiga firaaqada / ciidaha iyadoo si sahal ah loo heli karo.
Habka khadka tooska ah wuxuu yareeyaa fiisada / duulimaadka / hoyga & kharashka hoyga marka la barbardhigo habka Onsite. Intaas waxaa sii dheer, maqnaanshahaaga shaqada iyo luminta mushaharkaaga ee soo socda waa laga hortagi karaa.
Waxaad dhex mari doontaa bogagga koorsooyinka / doodaha / wada sheekaysiga tooska ah / fiidiyowyada tooska ah / Kediska / meeleynta iyada oo aan lahayn aqrin khasab ah ama dhameystir ah. Waad ka boodi doontaa / dhammeyn doontaa / dib u laaban doontaa / dib u soo ceshan doontaa fadhi kasta oo waqti kasta ah iyada oo aan xaddidnayn
Dib u Xusuuso
Koorsooyinka is dul socda / waxyaabaha ku jira waxaa lagu qaadanayaa bandhig maqal ah si loo ballaariyo xusuusta ardayga. Taasi waa la soo celin doonaa inta lagu jiro dhammaan wejiga koorsooyinka internetka.
Dhammaan koorsooyinkeennu waxay wataan shaqooyin ku habboon iyo imtixaanno lagu hagaajinayo aqoonta ardayga. Qiimaynta xilliyeed waxay ardayda ka caawin doontaa nadiifinta dhammaystirka koorsada ugu dambeysa.
Mawduucyadayada tababarka ee khadka tooska ah waxay la jaan qaadayaan manhajka Kormeeraha Caalamiga ah. Aqoontayada Tababarka ee Online-ka ah waxay faa'iido u yeelan doontaa in la nadiifiyo dhammaan imtixaannada shahaadooyinka Caalamiga ah.
Lacagta Koorsooyinka Ugu Yar
Laga soo bilaabo 2014, HTS COATING halkudhigeedu waa in lagu bixiyo waxbarasho tayo leh Qaybta Kormeerka Daaweynta Warshadaha iyo qaybaha Codsiga. Sidaa darteed khidmadaha Koorsada iyo Imtixaanku had iyo jeer waa tartan waana kuwa ugu hooseeya marka la barbar dhigo bixiyeyaasha tababarka ee jira.
Khubarada HTS COATINGS khubarada ayaa hormuud u ah Arjiga Daboolka Warshadaha iyo qaybaha Kormeerka. Sidaa darteed, dhammaan koorsooyinkeenna iyo waxyaabaha ku jira waxay ku keenayaan noocyo tiknoolaji ah oo cusub oo tiknoolaji ah.
Macaashka Dahaadhka tooska ah ee leh HTS COATINGS
Arday badan ayaa helay ku qanacsanaanta muddada gaaban inta ay ku jireen koorsooyinka Tababarka Kormeeraha Caalamiga ah. Bixiyeyaasha Shahaadada Caalamiga ah sida FROSIO / SSPC / NACE / BGAS / ICORR oo bixinaysa heerar kala duwan oo shahaadooyin ah. Mudada gaaban ee koorsooyinkaas caalamiga ah, Ardaydu waxay ubaahan yihiin fasalo udiyaarin oo dheeri ah. Marka, waxay dalbanayaan barnaamij kasta oo tababar iyo shahaadooyin ah. (Tababarka Kormeeraha Daboolka / Frosio Cope Inspektor / Isbatooraha SSPC / Shahaadada Frosio / Isbatooraha Rinjiga)
Si looga adkaado tababarka muddada-gaaban, Coatings Online-ka ah ayaa loogu talagalay degelkan koorsooyin kala duwan oo diyaarin ah HTS COATINGS dhammaystiran. Mashruucan 'E-learning platform' wuxuu si taxaddar leh ugu qaabeeyey cutub kasta fahamka fudud ee ardayga ee tikniyoolajiyadda kormeerka. Hadda, waxaan ku darnay SSPC iyo barnaamijyada diyaarinta ee la xidhiidha FROSIO. Goor dhow, waxaannu ku dari doonnaa barnaamijyo dheeri ah oo waafaqsan xulashooyinka ardayga.
XARUNTA ONLINE iyo Hts COATINGS, waxay u rajeyneysaa dhammaan ardaydeena horumarin xirfadeed oo wanaagsan oo laga helo saliida, gaaska, batroolka, iyo warshadaha culus.
CARRUURTA KU SAABSAN LACAGTA
FASALADA OO DHAMMAYSTIRAN
ARDAYDU DUGSIYADA KU SAMEE
Daboolista Kormeerayaasha & Shahaadooyinka: Dhibaatada dhaqaale ee adduunka iyo saamiga shaqo la'aanta ee adduunkan ayaa ah mid aan loo dulqaadan karin ujeedooyin iyo sababo badan. Intaa waxaa dheer, dhowaan COVID 19
ISO / SSPC Heerarka Isticmaalayaasha Caalamka
Copyright © 2021 Dharka internetka | Waxaa suuro galiyay Astaan ​​WordPress Theme